Wiricheya uye Kufambisa Scooter Hitch Mutakuri - Motokari
Foldable chokufambisa wiricheya iyo inokodzera chero mota.
hwiricheya Vanotakura Kune Mota vanobvumidza iwe kupeta furemu yechigaro, kuitira kuti uchengete munzvimbo inoenderana, kunge trunk yemota kana chigaro chemberi.
Ndichiri kupeta iyo hwiricheya inogona kukwana mune chero mota trunk, kana iwe uchida kuishandisa, zviri nyore kwazvo kuvhura furemu uye chigaro kuti zvive nyore.
hwiricheya Vanotakura Kune Mota dzinotakurika, dzinogona kuchengetwa mutiraki remota kana kubackseat kuti zvive nyore kutakura.
hwiricheya Vanotakura Kune Mota dzinoitwa kuti dzikwane mune trunk yemotokari, zvinoreva kuti izvo zvinogadzirwa kuti zvive zvisina kuremerwa, zvekutakura zviri nyore uye / kana kuchengetedza.
izvo hwiricheya uye Mobility Scooter Hitch Mutakuri Akandikodzera?
Sarudza iyo chaiyo transport chair zvaunoda.
[nyore_contact_forms fid = 5]
Nhare: (800) 80-KARMA (1-800-805-2762)